Seychelles handray ny sambo fitsangantsanganana miverina amin'ny Novambra 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles handray ny sambo fitsangantsanganana miverina amin'ny Novambra 2021
Vaovao Mafana • Cruising • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Manomboka ny vanim-potoana fitsangantsanganana 2021-2022 amin'ny 14 Novambra 2021, dia ny MS Island Sky, ny sambo fitsangantsanganana voalohany nandeha Seychelles hatramin'ny nanakatonana ny toerana hitondrana sambo fitsangantsanganana tamin'ny martsa 2020. Araka ny fanapaha-kevitra noraisin'ny manampahefana ao amin'ny firenena amin'ny volana martsa 2021 mifandraika amin'ny haben'ny sambo sy ny famerana ny fahaizan'ny mpandeha, Seychelles dia handray ireo sambo kely kokoa manana mpandeha 300 be indrindra.
Island Sky dia fahita matetika tany amin'ny rano Seychelles talohan'ny areti-mandringana.
Ny seranam-piantsoana dia hatao any amin'ireo nosy ivelany efatra any Seychelles - Aldabra, Assomption, Farquhar, ary Cosmoledo.
Ny governemanta dia miara-miasa amin'ny manampahefana ara-pahasalamana, ny fizahan-tany fizahan-tany, ny fahefana seranan-tsambo, ary ny indostrian'ny fizahan-tany, ary nametraka fomba fiasa vaovao ahafahana mamerina amin'ny laoniny ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo.
Island Sky, tantanan'ny Noble Caledonia monina any London, dia sambo fitsangantsanganana somary kely manana fahitana mitondra mpandeha 118; fahitana tsy tapaka any amin'ny rano Seychelles talohan'ny areti-mandringana, dia hiantso ny nosy efatra any Seychelles izy, dia i Aldabra, Assomption, Farquhar ary Cosmoledo. MS Island Sky dia hanaraka sambo fitsangantsanganana kely hafa mandritra ny vanim-potoana.
Ny sekretera lehibe misahana ny fiaramanidina sivily, seranan-tsambo sy an-dranomasina, Andriamatoa Alan Renaud, dia nilaza fa nandritra ny taona 2020, niara-niasa tamin'ny manampahefana ara-pahasalamana, sampana fizahan-tany, manampahefana eo amin'ny seranan-tsambo ary ny sehatry ny fizahantany, ny departemanta, dia nametraka fomba vaovao avelao ny famerenana soa aman-tsara ny sambo fitsangantsanganana fitsidihana an'i Seychelles.
PS Renaud dia nilaza fa mba hanamorana ny famerenana ny asan'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia namorona lisitra COVID-19 Company sy Cruise Ship Checklist ho an'ny mpandraharaha sambo fitsangantsanganana ary ny drafitra fitantanana seranan-tsambo COVID-19 ho an'ny manampahefana ny Departemantan'ny fiaramanidina sivily, seranan-tsambo sy ny ranomasina. hampahafantarina amin'ny volana manaraka. Ireo antontan-taratasy mifameno dia nifototra tamin'ny torolàlana navoakan'ny Ivon-toerana Eoropeana misahana ny fiarovana an-dranomasina (EMSA) sy ny Ivon-toerana Eoropeana misahana ny fisorohana aretina (ECDC) ary notohanan'ny International Maritime Organisation (IMO), ary nanangana fomba fiasa mifototra amin'ny tanjona, mamantatra fepetra horaisina amin'ny sambo sambo sy ny morontsiraka mba hiantohana ny fandriam-pahalemana.
"Ny antontan-taratasy dia mamaritra ny andraikitr'ireo masoivoho eo an-toerana sy ireo sambo fitsangantsanganana mifandraika amin'ny raharaha COVID-19, ny famantarana ny loharanon-karena lehibe sy ny mpiasa, ny fandaminana ny mpandeha sy ny terminal any amin'ny seranan-tsambo rehetra, ny fifanolanana raha sanatria misy valan'ny COVID-19 , ny fiarovana ireo vondrom-piarahamonina notsidihin'ilay sambo, ary, amin'ny ankapobeny, ny fandrindrana ny sambo fitsangantsanganana sy ny seranana mifandraika amin'ny COVID-19, "hoy i PS Renaud.
Ny departemanta koa dia hamoaka kinova maritime an'ny rafitry ny fahazoan-dàlana ankehitriny, izay hamboarina amin'ny sambo fitsangantsanganana sy yachts, miasa miaraka ho rafitra fiarovana ara-pahasalamana ary koa rafitra fanaraha-maso ny sisin-tany ho an'ny sambo ho avy. Ny fanontana an-dranomasina dia hampifandraisina amin'ireo rafitry ny sambo ary hahatonga azy io ho dingana tsy misy tohika, tsy misy taratasy, tsy misy mikasika na ho an'ny vahiny na ny fidinana an-tsambo na ny sambo.